Storj: waa qaab cusub oo lacag looga dhigo mashaariicda laga helo ilaha furan | Laga soo bilaabo Linux
Storj: waa qaab cusub oo lacag loogu kasbado mashaariicda laga helo ilaha furan
Xulka wararka oo dhan | | Kuwa kale
Se waxay rajeyneysaa in suuqa kaydinta daruurta uu koro ilaa $ 92.49 trillion sanadka 2022. Suuqa hadda waxaa ku xoog badan shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda sida Amazon, Google, Microsoft, iyo IBM.
Maanta, xisaabinta daruurtu waa deegaan gebi ahaanba udub dhexaad u ah halkaas oo adeeg bixiyaha uu si buuxda gacanta ugu hayo xogta ku kaydsan daruurtooda.
ka bixiyeyaasha adeegga kaydinta Shirkadaha daruuraha ee udub-dhexaadka ah waxay lacag badan ka qaadaan adeegyadooda.
Khidmadahaasi macnaheedu maahan inay wax weyn u tarayaan shirkadaha waaweyn, shirkadaha yar yar waxaa laga yaabaa inay dareemaan qanjaruufo.
1 Ku saabsan adeegyada dhexe
2 Daruur baahsan
2.1 Sidee tani ula xiriirtaa lacag-sameynta mashaariicda isha furan?
Ku saabsan adeegyada dhexe
Tusaale ahaan, Amazon, waxay ka qaadaan $ 23 bishii adeegga kaydinta ee ay bixiyaan.
Iyadoo waxaa suuragal ah in aysan si anshax xumo ah ugu maamulin xogta, weli waxay awood u leeyihiin inay adeegsadaan falanqaynta xogta.
Xaaladaha qaarkood, bixiyeyaasha kaydinta daruuraha sidoo kale waxay u adeegsan karaan xogta ku kaydsan server-yadooda si ay u bartilmaameedsadaan xayeysiisyada gaarka ah mulkiilaha xogta, waa wax shirkado badani u arkaan faragelin.
Waxaa ugu daran dhamaantiin, barnaamijyada daruuraha maanta waxay ku shaqeeyaan qaab server ah oo leh hal dhibic oo guuldarro ah, taasoo ka dhigaysa jebinta xogta inay aad ugu dhowdahay.
Keydinta daruuraha baahsan waa adeeg durba bilaabay in la xoojiyo habka maalinlaha ah ee shirkadaha iyo ganacsiyada.
Bixiyeyaasha adeegga sida Storj iyo Siacoin waxay mar horeba dhisteen joogitaan suuq lagu kalsoonaan karo iyagoo siinaya heer ammaan ah oo bixiyeyaasha daruuraha ee macaamiisha iyo serverku aysan iswaafaqi karin.
Storj waa xalka kaydinta gabi ahaanba baahintiisa iyo ilo furan oo bixiya moodeel ganacsi oo u eg Airbnb oo loogu talagalay dadka isticmaala kaydinta dheeraadka ah iyo xawaaraha ballaadhku.
Shirka Madasha Furan ee Waqooyiga Ameerika, Storj waxay ku dhawaaqday barnaamij cusub oo fidinaya qaabka dakhli soo saarista si loo furo mashaariicda isha laga helo.
Barnaamijka dhawaanta la shaaciyay ee "Partner Source Partner" waxay u suurta gelisaa mashaariicda il furan in ay soo saaraan dakhli mar kasta oo isticmaaleyaashoodu ay xogta ku kaydiyaan daruuraha.
Maamulaha Storj Ben Golub ayaa yidhi "Barnaamijkeena Partner Partner Partners wuxuu ka caawin doonaa shirkadaha isha furan inay ahaadaan kuwo furan oo bilaash ah isla markaana maalgashi ku sameeya kobaca".
Xaqiiqdii, barnaamijku wuxuu caawimaad weyn u noqon karaa mashaariicda isha furan ee badiyaa lagu xaddido miisaaniyadda.
"Waxay sidoo kale awood u siineysaa inay wax badan ku guuleystaan ​​miisaaniyaddooda, iyaga oo ka caawinaya inay noqdaan kuwo faa'iido leh, dardar gelinta khariidadaha ama ay la kulmaan yoolalka kale ee la xiriira dhaqaalaha," ayuu raaciyay Golub.
Storj waxay la socotaa adeegsiga shabakada waxayna soo celisaa qayb muhiim ah oo dakhli soo galay ah marka xogta mashruuc furan laga helayo keydka.
Qaarkood mashruucyada furan ee furan ayaa ku biiraya Storj iyo ku darida alaabadaada. Mashaariicdan ayaa waxaa ka mid ah Iskuxiraha, Couchbase, FileZilla, InfluxData, MariaDB, Minio, MongoDB, Nextcloud, Pydio, iyo Zenko.
Xusuusin dhinac ah, haddii aad haysato keyd dheeraad ah iyo ballaadhin ballaadhan oo shabakad ah, waxaad sidoo kale shakhsi ahaan ugu biiri kartaa Storj.
Sidee tani ula xiriirtaa lacag-sameynta mashaariicda isha furan?
Storj bogwaxay bixisaa sir iyo kaydinta daruur qaybinta xannibaadda bariga wuxuu adeegsadaa meel disk ah oo ka baxsan diskiga la wadaago by hawlwadeennada noodhka kaydinta.
Waxaa loogu yeeraa "beeraley" si loo abuuro shabakad aamin ah oo loogu talagalay horumariyeyaasha, kooxaha howlaha, ganacsiyada, iyo kuwa kale ee u baahan kaydinta daruur aamin ah. Adoo adeegsanaya sirta dhinaca macmiilka.
Storj wuxuu hubiyaa in xogta ay heli karaan oo kaliya mulkiilayaasha xogta. Qaab dhismeedka loo qaybiyey Storj, soosaarayaasheeda ayaa sheeganaya, wuxuu ka ilaaliyaa weerarada, wuxuu hagaajiyaa isku halaynta, wuxuuna hagaajiyaa waxqabadka marka loo eego dariiqooyinka kaydinta daruuraha dhaqameed.
Shabakada Storj, Si ka duwan kaydinta daruuraha caadiga ah, waxay siin doontaa dakhli waara oo waara oo loogu talagalay mashaariicda ilaha furan iyadoo la adeegsanayo shabakadda Storj. Storj, Golub wuxuu yiri, wuxuu siinayaa boqolkiiba 60 dakhliga guud dakhligiisa beeraleyda keydisa wuxuuna uqeybiyaa 40 boqolkiiba inta hartay kuwa horumariya il furan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Storj: waa qaab cusub oo lacag loogu kasbado mashaariicda laga helo ilaha furan
GTK + waxay la timid horumarin ku saabsan nooca cusub ee 3.24.1
Canonical wuxuu sii daayaa Ubuntu 18.04.1 image oo loogu talagalay Microsoft Hyper-V